लत रिकभरी मद्दत प्राप्त गर्नुहोस् | इनाम पुरस्कार
छोड्दै पोर्न इन्टरनेट अश्लील लतसँग सहयोग गर्नुहोस्
इन्टरनेट अश्लील लतसँग सहयोग गर्नुहोस्
इन्टरनेट पोर्नको लागि निरन्तर अधिवेशनले मस्तिष्कको प्रमुख भागहरू श्रिवल गर्न सक्छ। यसले यसको संरचना र प्रकार्य दुवैलाई क्षति पुर्याउँछ। परिवर्तनहरू थुप्रै तरिकामा प्रकट गर्न सक्छन्:
को रूप मा भावनात्मक नग्नता
morphing यौन स्वाद
वास्तविक साझेदारहरूमा रुचिको कमी
कुनै यौन सन्तुष्टि छैन
अपरिचित यौन फिनिशहरू
अश्लील लिपिहरू कार्य गर्ने इच्छा
erectile dysfunction and some cases
एस्केलेशन लाई अवैध सामाग्री।
धेरै मानिसहरू सहमत हुनेछन् कि यी अप्रिय, अवांछित र पनि खतरनाक प्रभावहरू छन्। तथापि, पुनःप्राप्तिको लागि एक सडक हो।
तपाईंको ब्रेन पोर्नमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफी लतमा वैज्ञानिक जानकारीको संसारको सबैभन्दा ठूलो भण्डार हो।
CEOP बाल अन्वेषण र अनलाइन सुरक्षा कमाण्ड हो। प्रहरीद्वारा चलाउनुहोस्, यो यूके-चौडाइ साइट हो। CEOP ले जब केहि चीज अनलाइन भएको छ को लागि समर्थन प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई चिन्तित वा असुरक्षित बनाएको छ।
एनएसपीसीसी सञ्चालन गर्दछ Childline जो जवान मान्छे को सबै प्रकार को समस्याहरु संग सहायता को लागि एक सेवा हो। यसमासँग अनलाइन यौन गतिविधिहरू र पोर्नोग्राफीमा राम्रो स्रोत छन्।
नग्न सत्य परियोजना मचेस्टर मा आधारित छ र एसएसई परिप्रेक्ष्यबाट सहायता प्रदान गर्दछ।
यहाँ केही राम्रो अनलाइन रिकभरी र इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको लागि समर्थन फोरमहरू छन्। तिनीहरू सबै संयुक्त राज्य अमेरिका वा अष्ट्रेलियामा आधारित हुन्छन्। पहिलो तीन अनलाइन समुदायहरू छन्। यी प्रस्तावले अन्य समुदायका सदस्यहरूबाट 24-घण्टा प्रति दिन मद्दत गर्दछ। तिनीहरूसँग बेलायतका धेरै सदस्य छन्।
राष्ट्र रिबुट गर्नुहोस्
राष्ट्र रिबुट गर्नुहोस् मानिसहरूको रिबूट 'प्रोत्साहन र शिक्षाको साथ उनीहरूको दिमागी मद्दत गर्दछ। कृत्रिम यौन उत्तेजना (जस्तै पोर्नोग्राफी) बाट पूर्ण बाबना रिबुट गर्दै। रिबूट राष्ट्रको स्थापना अमेरिकी कार्यकर्ता Gabe Deem (Twitter @GabeDeem) द्वारा स्थापित भएको थियो। उनीहरु को एक समुदाय हो जुन पोर्नोग्राफी को नकारात्मक प्रभावहरु को खोज को छ। यदि तपाईं वा प्रियजनहरू अश्लील लत र / वा पोर्न-प्रेरित यौन डाइफाइशनहरूसँग संघर्ष गर्छन् भने यो स्थान तपाईंको लागि हो। यस साइटमा तपाइँ आज धेरै पुन: प्राप्ति गर्न आवश्यक उपकरणहरू संग लैस गर्न धेरै स्रोतहरू र जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईं इन्टरनेट पोर्नको कारण सम्भावित हानिको बारेमा थप जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। रिबूट राष्ट्रले YouTube लाई पनि चलाउँछ टिभी च्यानल.
NoFap सबैभन्दा ठूलो अंग्रेजी भाषा आत्म-मद्दत समुदाय हो। यसले सहभागीहरूलाई चुनौती दिन्छ जसमा सहभागीहरू अश्लील र हस्तमैथुनबाट जोगिन्छ अश्लील र लत र बाध्यकारी यौन व्यवहारबाट पुनःप्राप्ति गर्न। 90 दिन सुनको मानक हो। कुनै फ्याग पोर्नोग्राफीका सबै पीडितहरूलाई समर्थन गर्दछ। तपाइँसँग अश्लील पोष्ट आफैलाई छ कि छैन वा केवल साझेदारको रूपमा समर्थन चाहिन्छ, अभिभावक, वा अश्लील साहित्यको साथ कुनै संघर्षको कुनै पनि प्रेम, NoFap
समुदाय तपाईलाई सहयोग गर्न यहाँ छ।
Reddit NoFap reddit / r / forum मा NoFap को अर्को संस्करण हो।
अन्य अनलाइन स्रोतहरू
एक विश्वास वा अधिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमिबाट आउँदै गरेको व्यक्तिको लागि दुई ध्यानाकर्षणहरू हुन् नयाँ औषधिसँग लड्नुहोस् अमेरिकामा र पूर्णता पुनर्स्थापित अष्ट्रेलियामा।
त्यसै गरी, यो अष्ट्रेलिया वेबसाइट महानताको लागि जानुहोस् राम्रो जानकारी र भिडियोहरू छन्।
सामुदायिक आधारित 12 चरण र SMART रिकभरी
सेक्स लडे बेनामी (एसएए) 12-चरण सिद्धान्तहरू पछि यौन लतसँग व्यक्तिहरूको लागि सहकर्मी सहयोग समूह प्रदान गर्दछ। सभाहरू नि: शुल्क छन् र बेलायतको वरिपरि आयोजित हुन्छन्।
सेक्स र प्यार Addicts बेनामी (SLAA) 12-चरण सिद्धान्तहरू पछि सेक्स र / वा प्रेम लतसँग व्यक्तिहरूको लागि साथी साथीहरूको प्रस्ताव प्रदान गर्दछ। सभाहरू नि: शुल्क छन् र बेलायतको वरिपरि आयोजित हुन्छन्।
COSA पुरुष र महिलाहरूको लागि एक 12-चरण रिकभरी कार्यक्रम हो जसको जीवन बाध्यकारी यौन व्यवहारले प्रभावित भएको छ। सभाहरू नि: शुल्क छन् र बेलायतको वरिपरि आयोजित हुन्छन्।
स्मार्ट रिकवरी - स्वयं व्यवस्थापन र पुनःप्राप्ति प्रशिक्षण। यूके स्मार्ट स्मार्ट रिकवरी मा अनलाइन सेवाहरू एक सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफार्म, एक प्रशिक्षण साइट र च्याट प्रणाली समावेश गर्दछ।
पोर्नोग्राफीको पहुँच नियन्त्रण गर्न सफ्टवेयर *
फिल्टरहरूले पोर्नोग्राफी प्रयोगको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर तिनीहरू सधैं बाईपास गर्न सकिन्छ। हामी तिनीहरूलाई उपयोगी सहायताको रूपमा देख्छौं, तर एक व्यभिचारीको प्रयोग गर्न चाहन्छ जुन उनीहरूको वरिपरी एक बाटो खोज्छ। प्रायः यसले अरूको अशुद्ध फोन वा ट्याबलेट प्रयोग गरी समावेश गर्दछ।
सम्झौता आँखाहरू इन्टरनेट जवाबदेही र फिल्टरिंग प्रदान गर्दछ, पोर्नोग्राफी प्रयोगकर्ताहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ
बार्क आमाबाबुले किशोरहरूलाई सोशल मिडिया प्रयोगको अनुगमन गर्ने अनुमति दिन्छ
नर्टन परिवार को प्रीमियर
सामग्री बाधा र परिवार सुरक्षा द्वारा इनटेग्रो द्वारा
सुरक्षित आँखा र म्याकएफाई द्वारा uKnowKids
विटगोगो अभिभावक फिल्टर
* यो केवल केहि धेरै सफ्टवेयर विकल्पहरू उपलब्ध छन्। तिनीहरूलाई यहाँ सूचीबद्ध गर्दै रेभर्ड फाउन्डेशनले समर्थन गर्दैन। फिल्टरहरू र निगरानी अनुप्रयोगहरू तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि सही हो भनेर जाँच गर्न समय लिनुहोस्।
सिफारिस गरिएका किताबहरू
तपाईंको ब्रेन पोर्न: इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र लतको उभरिरहेको विज्ञान गैरी विल्सन द्वारा, राष्ट्रमंडल प्रकाशन। यसमा उपलब्ध छ प्रिन्ट, अडियो बुकको रूपमा र द्रुत रूपमा ई-पुस्तकको रूपमा.
Wack: आदी को इन्टरनेट पोर्न नूह बी ई, चर्च द्वारा। यदि तपाईं साइन अप गर्नुहुन्छ भने PDF को रूपमा उपलब्ध छ यहाँ। नूह चर्चले अनुभवबाट लेखेको छ, एक इन्टरनेट अश्लील पोर्टलोग्राफी आफैलाई।
पोर्न जाल: पोर्नोग्राफीको कारणले समस्याहरूको सामना गर्न आवश्यक गाइड वेंडी माल्ट्ज र लैरी माल्ज द्वारा।
सेक्स लत: साझेदारको परिप्रेक्ष्य एक अग्रणी यूके चिकित्सक पाउला हॉल द्वारा।
सेक्स लत 101: सेक्स, पोर्न, र लत लत Papheack देखि हिसाब गर्न एक मूल गाइड by रबर्ट वेइस, एक प्रमुख अमेरिकी चिकित्सक।
डाक्टरहरू: रिकभरी वेबसाइटहरूमा भएका व्यक्तिहरूले प्राय: पोर्नोग्राफी प्रयोगको प्रभावबाट नचाहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नतिजाको रूपमा उनीहरूले वियाग्राको वर्णन गर्छन् वा खराबीका समस्याहरूको सामना गर्न मन पराउँछन्। भिषाले रक्तचापलाई रक्तदानको लागि मद्दत गर्न 'बेल्ट तल' काम गर्दछ। समस्या यो हो जुन पोर्न-प्रेरित गर्भनिरोधक रोग मस्तिष्क र जेनेटिटलबीच गरीब तंत्रिका सङ्केतको एक मुद्दा हो। परिणाम वियाग्रा र समान गोलहरू प्राय: काम गर्दैन वा काम गर्न रोक्न पनि छिटो छिटो मानिसहरू छोडेर पनि उत्सुक हुन्छन्। ED कसरी हुन्छ भन्ने बारे थप जानकारीको लागि, यो हेर्नुहोस् प्रस्तुति.
यदि तपाई हेल्थकेयर प्रोफाईल हुनुहुन्छ भने यस क्षेत्रमा सीपीडी प्रशिक्षण चाहानुहुन्छ, हाम्रो दायरा हेर्नुहोस् कार्यशालाओं। तिनीहरू शाही कलेजको जनरल प्रोजेक्टनर्स द्वारा मान्यता प्राप्त छन्।
स्कटल्याण्डमा, GPs बाट यौन स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा रेफरल समयहरू 9-12 महिनाको वरिपरि छन्। यौन स्वास्थ्य क्लिनिकहरूले प्राय: अश्लील प्रथाको लतलाई निजी अभ्यासमा चिकित्सकलाई शंकास्पद अवस्थामा राख्दछन्। यदि तपाईं नि: शुल्क अनलाइन सेवाहरू मार्फत अश्लील छोड्न व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने, अन्य विकल्पहरू छन्। तपाईंसँग मूल मुद्दाहरू हुन सक्छ वा एक छोडेर समर्थन गर्न आवश्यक छ प्रशिक्षित यौन चिकित्सक। एक राम्रो यौन चिकित्सकले पोर्नोग्राफी सम्बन्धी विकार र यौन लत बुझ्नै पर्दछ। यूकेमा छाता संगठनहरूको एक सम्पर्क गर्नुहोस्:
सम्बन्ध स्कटल्याण्ड (केवल युगलहरूका लागि)।
परामर्श र मनोचिकित्सा को लागि ब्रिटिश संघ.
स्कटल्याण्डमा परामर्श र मनोचिकित्सा.
कलेजको यौन र सम्बन्ध चिकित्सक.
यौन लत र अनिवार्यता को उपचार को लागि एसोसिएशन.
अश्लील लत बढ्न सक्छ। यदि तपाईंलाई यौन अपराधको साथ चार्ज गरिएको छ भने तपाईंलाई व्यावसायिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। तुरुन्तै एक प्रशिक्षित यौन चिकित्सकबाट सहयोग खोज्छ। तपाईंलाई पनि राम्रो वकील चाहिन्छ।
यदि तपाईं स्कटल्याण्डमा हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई नि: शुल्क सेवालाई सम्पर्क गर्न सिफारिस गर्छौं यसलाई अहिले बन्द गर्नुहोस्!। यसलाई रोक्नुहोस् अब एक बाल संरक्षण दान हो। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यौन दुर्व्यवहार रोक्नको लागि आमाबाबु र समुदायका सदस्यहरू बीचको जागरूकता हो। यो का एक भाग हो लुसी विश्वासफुल फाउन्डेशन जुन ब्रिटेनमा काम गर्दछ।
यसलाई रोक्न अब यौन दुर्व्यवहार र बालबालिकाको शोषणको बारेमा चिन्ता र जवाफ दिँदै सार्वजनिक भरोसाको निर्माण गर्न काम गर्नुहोस्। तिनीहरू पनि समस्याग्रस्त यौन विचारका साथ समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्छन्। यसमा ती व्यक्तिहरू यौन दुर्व्यवहारको जोखिममा हुन सक्छन्। यसलाई रोक्नुहोस् अब पनि बच्चाहरूलाई दुर्व्यवहार इमेजरी इमेजरी वा जस्तै सम्बन्धित यौन अपराधको आरोप लगाइएकाहरूलाई पनि मद्दत गर्दछ। यसमा इन्टरनेट अपराधहरूको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरू समावेश छन्। उनीहरूले साथीहरूको परिवार र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ जुन यौन अपमानजनक वा कसलाई अपमानजनक छ।
<< पोर्न समस्या पहिचान गर्नुहोस् जाँदैछन् पोर्न फ्री >>